China okuphakelayo Ibanga Collagen ifektri kanye nabaphakeli | IGelken
Okuphakelayo grade collagen waziwa njengempuphu yobisi lwezilwane ngenxa yenani laso eliphakeme kanye nokudla okunempilo. Inezinzuzo ezilandelayo:
Okuqukethwe kwamaprotheni okuphezulu, okunomsoco, okuqukethwe kwamaprotheni okungaphezu kuka-90%, okunothe ngezinhlobo ezingaphezu kwe-18 zama-amino acid, futhi kuqukethe i-calcium, i-phosphorus, i-iron, i-manganese, i-selenium nezinye izimbiwa zamaminerali ezibalulekile kanye nezinto ezilandelwayo.
Ingasetshenziselwa inkukhu, ingulube nezinye izinhlobo zokudla, ingakhuthaza ukukhula kwayo, ithuthukise ukubukeka kwezilwane.
Okuphakelayo grade collagen isetshenziswa ekudleni kwasemanzini, inhlanganisela eningi ye-amino acid kanye ne-glycine eningi, engeyona nje into enhle yokuheha ukudla kepha futhi inomphumela wokukhuthaza ukukhula. Ngasikhathi sinye, lo mkhiqizo ubuye ukunamathela okuhle kokuphakelwa emanzini. Ukuvela kokuphakelwa kwe-pellet noma okuphakelayo kwamanzi okukhukhumezekile okukhiqizwe ngemuva kokusebenzisa lo mkhiqizo kubushelelezi futhi kucocekile, izinga lokwephuka lincishisiwe kakhulu, isikhathi sokugcinwa kwesithiyelo emanzini siyathuthukiswa, nokungcoliswa kwamanzi kuyancipha.
Isicelo embonini yokuphakelayo
1. Faka okunye kokudla kwenhlanzi okungenisiwe ukuze kukhiqizwe okuphakelayo okuxubekile nokwehlanganisiwe
I-hydrolyzed collagen, njengesengezo esinomsoco samaphrotheni ezilwane, isetshenzisiwe ukufaka esikhundleni noma ukubuyisela ingxenye yenhlama yokudla kwenhlanzi engenisiwe ekukhiqizweni kokuphakelayo okuxubekile nokuphakelayo okuhlanganisiwe, futhi umphumela wayo wokudla kanye nenzuzo yezomnotho ingcono kunokudla kwenhlanzi okungenisiwe.
2. Isetshenziswa njengesibopho sokuphakelwa kwe-pellet
Ukungeza i-1% -3% ye-hydrolyzate collagen kokuphakelayo kwe-pellet ngokusobala kungakhuphula umphumela we-granulation. Ifanele okuphakelayo kwamanzi, hhayi kuphela ukuthuthukisa okuqukethwe kwamaprotheni ongahluziwe, futhi kulula ukudoba nokudla kwezimfanzi, ukuthuthukisa imali ekhokhelwa okuphakelayo, ukuvimbela ukungcoliswa kwamanzi.
Langaphambilini I-Bone Glue Bead
Olandelayo: I-Capsule Engenalutho Elukhuni